Nagu saabsan - Huaian ASN Medical technology Co., Ltd.
Huaian ASN teknolojiyadda caafimaadka Co., Ltd.
waxaan nahay soo saare hal abuur leh oo ku takhasusay badeecada cilmi baaris iyo horumarin, wax soo saar iyo iib. Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2012. Tan iyo markii la aasaasay, waxay la shaqeyneysay jaamacadaha iyo kulliyadaha si ay u gaaraan guulo teknoolojiyadeed oo ku saabsan qaybta balaastigga ah ee orthopedic iyada oo loo marayo isku dhafka dhow ee wax soo saarka, daraasadda iyo baaritaanka.
Kadib sannado badan oo dadaal aan kala go 'lahayn, Huaian ASN Medical Technology Co., Ltd. hadda waxay noqotay soo saaraha heerka koowaad ee cajaladda loo yaqaan' Orthopedic Casting tape and splints 'ee dalka. Waxaan had iyo jeer u hoggaansamaannaa siyaasadda tayada leh ee naqshadeynta taxaddar leh, wax soo saar xeel-dheer, adeeg xamaasad leh, ku dadaalidda fasalka koowaad, dhiirrigelinta horumarka teknolojiyadda. Waxaan marwalba u hogaansanahay falsafada ganacsiga ee daacadnimada iyo kalsoonida, iyo guuleysiga guusha udhaxeysa martida iyo macmiilka. Waxaan u tixgelineynaa tayada sida nolosha shirkadda, waxaanan bulshada ugu celinaa alaab tayo sare leh qiime jaban.
Shirkaddu waxay leedahay 15 shati oo ay iska leedahay oo ay u caddeyso shirkadaha farsamada sare ee qaranka.
Waxaan haynaa shahaadada nidaamka ISO 13485, shahaadada EU CE, shahaadada US FDA iyo kaqeybgalka carwooyin badan oo ganacsi oo waaweyn gudaha iyo dibaddaba sanad walba.
Shirkadeenu waxay inta badan soo saartaa badeecooyin shati leh sida cajalad loo yaqaan 'Orthopedic Casting tape', cajalado dayactir, iyo cajalado dhuumaha gaaska ka ilaaliya. Waxaan soo dhoofsannay qalab iyo qalab waxaanna si isdaba joog ah u soo saarnay alaabooyin cusub. Wax soo saarka shirkadda waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 20 waddan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Kanada, Jarmalka, Ingiriiska, Talyaaniga, Masar iyo Hindiya Marka la eego adeegyada wax soo saarka, koox adeegga iibka ka dib u heellan ayaa loo sameeyay si loo yareeyo welwelka macaamiisha. Jidka horumarka mustaqbalka, shirkaddu waxay u hoggaansameysaa caqiidada siinta macaamiisha wax soo saarka ugu fiican, kaamilidda wax soo saarkooda iyo adeegyadooda, iyo bixinta macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah.
Bandhigii ugu dambeeyay
Waxaan kaqeyb galnay bandhigyo badan oo caalami ah. Waad hubin kartaa macluumaadka bandhigyada aan horay uga soo qayb galnay.